पाउला गैलेगो। मसीहको लेखकसँग अन्तर्वार्ता जसले हामीलाई एकतामा पार्दछ | वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी: पाउला गैलेगोको वेबसाइट।
पाउला गलेगो, लेखक हुनुको अलावा उनी एक शिक्षिका र एक फिलोलॉजिस्ट हुन् र उनले किवी, एस्कार्लाटा र ग्रह जस्तो प्रकाशकहरूसँग केहि उपन्यासहरू प्रकाशित गरिसकेका छन्। उनका शीर्षकहरू मध्ये एक हो क्रिस्टल, पन्ना योद्धा, जुन Ateneo de Novela Joven de Sevila पुरस्कार मा एक फाइनलिस्ट थियो, भियनामा १ hours घण्टा, ओस्लोमा n रातहरू, एक जाडो दिन, पेरिसमा weeks हप्ता, सास आगोको भुमरी अन्तिम एक हो हामीलाई एकताबद्ध मसी, यो यो बर्ष जारी भएको छ। म तपाइँको समय र दयालु व्यवहार लाई कदर गर्छु यो अन्तर्वार्ता कि उसले मलाई प्रदान गर्यो।
पाउला गलेगो - अन्तर्वार्ता
साहित्य वर्तमान: La मसीले हामीलाई एकताबद्ध गर्दछ तपाईंको अन्तिम उपन्यास हो। तपाईं हामीलाई यसको बारेमा के बताउनु हुन्छ र यो विचार कसरी आयो?
पाउला गैलेगो: हामीलाई एकताबद्ध मसी त्यो उपन्यास हो आशा, परिवार र यसको सबै रूप मा प्रेम को कुरा: साथीहरू र परिवारको लागि प्रेम जुन हामी छनौट गर्दछौं, आफैंलाई प्रेम गर्नुहोस् र स्वतन्त्रताको प्रेम। उसको कथा हसरेटको साथ आयो। उनी मेरो टाउकोमा देखा पर्न पहिलो थिइन, बोल्नको लागि तयार। तब आणिक र काइल उनीहरूसँगै आइपुगे र अरू सबै कुरा। सबै कुरा राम्ररी सँगै फिट भयो: वास्तविक ऐतिहासिक घटनाहरू, मितिहरू, सानो संयोग ... त्यो कथा मेरो लेख्नको लागि थियो।
पीजी: यो मैले पढेको पहिलो थिएन, तर यो पहिलो हो जसले मलाई पूरै पठनको संसारमा प्रवेश गरायो। ईधुनको सम्झनाहरु. मैले लेखेका पहिलो कथाहरू छोटो कथाहरू थिए; र पहिलो उपन्यास उचित थियो एक काल्पनिक कथा जुन मैले १-वर्षको हुँदा आफैं प्रकाशित गरें.
PG: म भन्न जाँदैछु ले Bardugo, होली कालो र सारा जे मास.
पीजी: यहूदा, को क्रूर राजकुमार। उहाँ मलाई एक धेरै राम्रो किनार संग एक धेरै विकसित, चाखलाग्दो चरित्र जस्तो देखिन्छ। कुनै श doubt्का बिना, उनी मेरो मनपर्ने साहित्यिक पात्रहरू हुन् र म उनलाई भेट्न मन पराउँछु।
पीजी: म बिहान पढ्छु र राती लेख्छु। म लेख्न मनपराउँछु जब म आफ्नो बाँकी जिम्मेवारी समाप्त गर्दछु इनामको रूपमा।
PG: मेरो मनपर्ने ठाउँ पढ्न बैठक कोठामा छ, मेरो बुकस्टोरको छेउमा र मेरो तालिकाहरूमा बोटहरू र पुस्तकहरू। लेख्न मलाई मन पर्छ भित्र हुनु मेरो कार्यालय, मेरो विचारहरू, मेरो अव्यवस्थित डेस्क, शेल्फमा मेरो पुस्तकहरू र मेरो छेउमा निदाएको बिरालोले भरिएको।
PG: मेरो मनपर्ने विधा, दुबै पढ्न र लेख्न को लागी, हो कल्पना। म पनि विज्ञान कल्पित कुराको आनन्द लिन्छु। मलाई लाग्छ ती ती सब सबेनरेहरू हुन् जुन मलाई सबैभन्दा मन पर्छ: ऐतिहासिक सेटिंग, कल्पना र विज्ञान कल्पना।
PG: म पढ्दै छु केहि रानी होली ब्ल्याक को, र अहिले म दोस्रो र अन्तिम भाग पोलिश मा काम गर्दैछु कालो सास; को निरन्तरता आगोको भुमरी.
AL: तपाइँ कसरी सोच्नुहुन्छ कि प्रकाशन दृश्य धेरै लेखकहरूको लागि प्रकाशित गर्न को लागी हो?
पीजी: मलाई लाग्छ कि यो त्यस्तो संसार हो धेरै काम र प्रयासको आवश्यक छ, र भाग्य को पनि ठूलो मात्रा। जे होस्, उभरते प्रकाशकहरूलाई धन्यबाद, त्यहाँ पुस्तक प्रकाशित गर्न अधिक र अधिक सम्भावनाहरू छन्। बजार यो केहि दशक पहिले भन्दा ठूलो छ।
पीजी: मलाई लाग्छ कि हामी बस्ने सबै कुराले कुनै न कुनै तरिकाले मद्दत गर्न सक्छ, तर म केहि तुल्याउन चाहन्नँ कि भन्ने कुराले धेरै मानिसहरूलाई दु: ख भोग्यो। एक क्षणकाे लागी, तपाईंले प्रतिरोध गर्नु पर्छ, अघि बढ्नुहोस् र आशा छ कि सबै सुधार हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » पाउला गैलेगो। मसीहको लेखकसँग अन्तर्वार्ता जसले हामीलाई एकताबद्ध गर्दछ